"I want you" ရုပ်ရှင်မှ 33 စာပိုဒ်တို | | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ရုပ်ရှင်တွေကကျွန်မတို့ကိုမနေထိုင်ခဲ့ဘူးလို့ခံစားရစေတဲ့ဘဝတွေကိုခံစားရစေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါတို့ခံစားခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါအဲဒီစိတ်ကူးယဉ်အတွေ့အကြုံတွေကငါတို့လိုဖြစ်သွားတယ်။ ၎င်းသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖွင့်ပေးပြီးအသက်ရှင်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဖြစ်ပျက်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များကိုစဉ်းစားသည်။ "ငါသည်သင်တို့ကိုအလိုရှိကြသည်တွင်" ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများမှစိတ်အားထက်သန်မှု၊ ချစ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှု၊ မနာလိုမှု၊
အကယ်၍ သင်ဤစာပိုဒ်တိုများရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဖြစ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါက၊ သူတို့ကခံစားချက်များစွာကိုပြသနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်မြင်ချင်လိမ့်မည်ဟုရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးစပိန်သရုပ်ဆောင် (Mario Casas, Clara Lago, María Valverde, Diego Martín, vlvaro Cervantes, Nerea Camacho) နှင့်ဘယ်တော့မှစတိုင်နှင့်ဘယ်တော့မှမပျောက်ကွယ်နိုင်ဘဲဖာနန်ဒိုGonzález Molina မှရိုက်ကူးထားသော။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုယုံကြည်စေမည့်ဤစကားစုများကိုလက်မလွတ်ပါနှင့်။
"ငါသည်သင်တို့ကိုချင်တယ်" ၏ Phrases
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ သင်သည်သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတံတားပေါ်တွင်ကောင်းကင်ပေါ်က ၃ မီတာအထက်တွင်ပန်းချီဆွဲခြင်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သူမဟုတ်လား။
Hache ပြန်လာပြီ မနေ့ကသူကျွန်တော့်ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်၊ သူကကျွန်တော့်တက္ကစီဘေးမှာဆိုင်ကယ်စီးနေတယ်။ သူကသင့်ကိုသတင်းစကားပို့ပေးခဲ့တယ်။
ဤသူသည်ကြီးမားသည်မဟုတ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမပျော်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူ့မှာဒူးအထိရောက်နေတဲ့ကြက်တစ်ကောင်ရှိတယ်။
ငါခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်မလွှတ်ဘဲရှေ့သို့ရွေ့လျားခြင်းမရှိဘဲတစ်ဖက်မှအခြားတစ်ဘက်သို့သွားခဲ့တယ်။ အနာဂတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘယ်မှာလဲ။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ရှေ့သို့ရွေ့ခြင်း၊ ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ခြင်း၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မှုန်ဝါးတောက်ပဖြစ်လာသည်ဒါကြောင့်အနီးကပ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေသို့သင့်ကိုကြိုဆိုပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ထူးခံအုပ်စုငယ်လေးကသာကျွန်တော်တို့ကိုသုံးခွင့်ရလိမ့်မယ်။ ကမ်းခြေဘားကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရင်၏ထူးခြားသောဂီတအရသာကိုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနိုင်သည့်နေရာ။
သင်လိုချင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဤရှုပ်ထွေးမှုကိုသန့်ရှင်းအောင်ကူညီနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတစ်ခုလုပ်ရင်နောက်တစ်ခါကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာငါတို့နှစ် ဦး စလုံးမှတက်သည်။ ဒါကလွယ်ကူစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ (... ), ဒါပေမယ့် Hugo မဖြစ်နိုင်ဘာမျှ။
မင်းရဲ့ပြproblemsနာတွေကဘာလဲဆိုတာသူတကယ်သိတယ်။ ဒါဟာထူးဆန်းပါတယ် ... သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်နားမလည်နိုင်လျှင်တောင်။
ယောက်ျားများ၊ မင်းကိုငါတို့မကြိုက်ဘူးဆိုတာတစ်ချိန်ကရှာဖွေပါ။ ငါတို့အားအနည်းဆုံးနွားအုပ်များထဲမှယောက်ျားလေးအားလုံးချီးမွမ်းသည်။ စကားမစပ်ပြောရရင်မင်းတို့ကမင်းကိုဆက်မနေချင်ကြဘူး၊ ဟုတ်တယ်၊
အနာဂတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဘယ်မှာလဲ။ အနီးကပ်ကြည့်ခြင်း၊ ရှေ့သို့ချီခြင်း၊ ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိသောကြောင့်မှုန်ဝါးမှုသည်ထက်မြက်လာပြီးရှင်းလင်းလာသည်။ သငျသညျအမှုအရာဖြစ်ပျက်ခွင့်ပြုရန်ရှိသည်။ ယခုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ မရှိတော့ပေမယ့်ငါ့အပေါ်မှာမူတည်သည်။
သငျသညျလိုလြှငျသငျသညျအကြှနျုပျကိုဤရှုပ်ထွေးဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။ ငါတို့ကြိုးစားကြိုးစားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရပြီ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မလွယ်ကူဘူး။ အိမ်စာရှိသော်လည်းသင်မဖြစ်နိုင်သည့်အရာမရှိပါ။ ကြား ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းမနေနိုင်ဘူး
ငါ့ကိုဆက်ထိန်းထားမည်ဆိုပါကသင် ပို၍ ပျော်မွေ့လိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်အစ်မ fuck ဆိုတဲ့ဂီတလို့ခေါ်တဲ့စီဒီကိုငါထားခဲ့တယ်။
မင်းခွင့်လွှတ်ရမယ် သင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပါ။
ငါသည်သင်တို့ကိုစတင်သောအခါငါငါ၏အလိုင်စင်ပြားကိုအလွတ်ကျက်သောအခါ, လိုင်စင်ပြားငါ့ကိုလိပ်စာနှင့်ထိုအရပ်မှငါ့နံပါတ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။ Macho ရဲစွမ်းသတ္တိ။
ငါအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုမစောင့်ချင်ဘူး၊ ဟုတ်တယ်။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ။ ယခု၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်လာလိမ့်မည်။ ယခုမူကားကျွန်ုပ်ကိုမဟုတ်ဘဲသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ မင်းကိုချစ်တယ်။
ဒါဟာနွေရာသီစခန်း Syndrome ။ သင်စခန်းချနေထိုင်ပြီး၊ သင်၏ဘ ၀ ၏အကောင်းဆုံးနွေရာသီတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းအိမ်ပြန်ပြီးတစ်နှစ်လုံးနောက်လာမည့်စခန်းကိုပြန်စဉ်းစားရန်၊ အရာအားလုံးကိုကောင်းကောင်းပြန်ပြောနိုင်ရန်၊ ထိုအခါကလာ, အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။ အကောင်းဆုံးနှစ်တွေဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ထိုသူတို့ကထပ်ခါတလဲလဲဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏အသက်တာကနေပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါ။ ထိုလူကိုသင်ဘယ်တော့မျှနောက်တဖန်မတွေ့ရပါ၊ သို့မဟုတ်သူတို့သင်ထားခဲ့သည့်အရာများနှင့်သင်သူတို့အားပြောလိုသောအရာများကိုသူတို့အားပြောပြနိုင်လိမ့်မည်။ သင်ခဲတံတစ်ချောင်းယူပြီးကျန်သူအားစာရေးသည်၊ သင်စာပို့သည်။ သင်ကခေါက်ပြီးလျှင်မီးလျှံကိုယူပြီးမီးရှို့ရမည်။
ကောင်းပြီကောင်းပြီကောင်းပြီ, ငါတို့ဒီမှာဘာရှိသနည်းလှပသော sucker! မင်းကထရပ်ကားမောင်းတဲ့ဒဏ္wereာရီလို့မင်းထင်ခဲ့တယ်၊
ဒီမှာအမှုအရာအနည်းငယ်ပျင်းစရာရှိပါတယ်။ မင်းပြန်လာပြီဆိုတာငါမသိဘူး ကြိုဆိုပါတယ် ဟေ့အခုမင်းရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူတူငါစားသောက်နေတုန်းကုန်စုံစတိုးဆိုင်ဟောင်းမှာညနေစာစားဖို့ငါတို့လာနေပြီ။ မင်းဘာကြောင့်မလာတာလဲ သူတို့ကမင်းကိုတွေ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြလိမ့်မယ်။
အိုးအဆင်ပြေ! မင်းကမကောင်းတဲ့ပြက်လုံးတွေကိုပြောတာကြောင့်ငါတို့ panties တွေကျသွားတယ်လို့ထင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်ုပ်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်းတွင်ရှိနေသောကြောင့်သင့်ကိုသင်၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်လာပြီးကယ်တင်ရန်သင့်အားစောင့်နေသည်။
တောင်းပန်ပါတယ်သူငယ်ချင်း ငါသည်သင်တို့ကိုပိတ်ဖို့ရန်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ထင်ခဲ့တယ်။ ငါကအားလုံးကိုတက်လွဲချော်သွားတယ်?
ဟုတ်ပါတယ်, အချို့ appetizers မပါဘဲကောင်းသောညနပေိုငျး (... ) ရှိသေး၏။ ပထမ ဦး ဆုံးအ vermouth, ဒါပေမယ့်ကောင်းစွာရေးဆွဲ, ဟောင်းကိုအသာပုတ်ပါ။ ယခုမှာ gazpacho, ဒါပေမယ့်အစိမ်းရောင်ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ဖရဲသီးနှင့်အတူ။ ထိုအခါဆိတ်သငယ်ဒိန်ခဲပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့ (... )
သူတို့နဲ့အတူအရမ်းဂရုစိုက်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ fuck ဆိုတဲ့မိခင်ထက်ပိုပြီးသစ္စာဖောက်တာပဲ။
Hugo ကိုကြည့်ပါ ဦး ငါမခံရပ်နိုင်တာတစ်ခုရှိရင်အဲဒါမှားယွင်းတဲ့ကျိုးနွံမှုရှိသူတွေပါ။ ဒီဟာထက်ပိုကောင်းတာတစ်ခုခုရှိလား။ ထိုအခါအလုပ်လုပ်ရန်။ မင်းကဖေဖေရဲ့ပလပ်ဂင်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူကိုမှမပြောဘူးလို့ငါကတိပေးတယ်။
ခွင့်လွှတ်တယ် မင်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတံတားပေါ်ကပေ ၁၀ ပေမှာပန်းချီဆွဲခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြေငြာသူဟုတ်သလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » "I want you" ရုပ်ရှင်မှ 33 စာပိုဒ်တိုများ